Maamulihii Shirkada Somtel ee Gobolka Mudug oo xalay lagu dilay Gaalkacyo – STAR FM SOMALIA
Maamulihii Shirkada Somtel ee Gobolka Mudug oo xalay lagu dilay Gaalkacyo
Maamulihii Shirkadda Isgaarsiinta Somtel ee Gobolka Mudug Cumar Cabdulle oo ku magac dheeraa Cumar Dheere ayaa xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo.
Kooxo hubeysan ayaa Allaha u naxariistee Cumar Dheere ku dilay agagaarka masaajidka Salaama ee waqooyiga Gaalkacyo, kadib markii uu ka soo baxay salaadii Maqrib.
Goob joogayaal ayaa sheegay in dhalinyaro ku hubeysan bastoolado ay dhowr xabadood kaga dhifteen marxuumka qeybhaa sare ee jirka, kuwaasoo goobta ka baxsaday.
Ciidamada ammaanka Puntland ayaa howl galo ay ka sameeyeen xaafadaha waqooyiga Gaalkacyo waxay ku soo qabteen dad looga shakisan yahay inay ka dambeeyaan dilka.
Maamulka Gobolka Mudug ee Puntland ayaa sheegay inay sharciga la horkeenayo cid alla cidii ku cadaata dilka Cumar Dheere oo horay u soo noqday Guddoomiyaha Ganacsatada Gobolka Mudug.
Ma jirto cid sheegatay dilka Ganacsadahan, hase ahaatee waxaa uu qeyb ka noqonayaa dilal dadka wax galka u ah bulshada ee loogu geystay Gaalkacyo muddooyinkii u dambeeyay.
Uganda oo beenisay inay la baxeyso ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya oo lagu wareejiyay qeyb ka mid qalabka Maamulka Hawada
Taliska Ciidanka Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay Bandow lagu soo rogay Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho, kaasi oo socon doona inta doorashada Madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ka dhammaaneyso.
Afhayeenka Booliska Cabdifitaax Aadan Xasan oo shir Jaraa’id goor dhow u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in Bandowga lagu soo rogay Magaalada Muqdisho uu bilaabanayo Caawa saacada markii ay tahay 09:00 PM, kuna egyahay maalinta Isniinta 06:00 Arroornimo.
Wuxuu sheegay Afhayeenka in gebi ahaan la joojinayo isku socodka gaadiidka iyo dadka ee Muqdisho, isla markaana la xirayo dhammaan waddooyinka Magaalada iyo Suuqyada dadka ka adeegtaan ilaa laga gaaro maalinta Isniinta oo ay taariikhdu tahay 16-ka May..
Sidoo kale Afhayeen Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa caddeeyay in xitaa la joojin doono socodka lugta ee dadweynaha, isagoona shacabka kunool Caasimadda Muqdisho ugu baaqay inay goor hore soo adeegtaan oo waxa ay u baahan yihiin ka qaatan Suuqyada.
Ugu dambeyn Afhayeenka Ciidanka Booliska dolwadda Soomaaliya ayaa hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay in xaaladdo Caafimaad oo Deg-deg ah haddii lasoo deristo shacabka inay la soo xiriiraan Taliska Booliska dowladda.
Doorashada Madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berry oo Axad ah ay ka qabsoonto Magaalada Muqdisho gaar ahaan Teendhada Afisyooni, waxaana socda ololihii ugu dambeeyay ee doorashada dalka.
Xaaladda Magaalada Dhuusamareeb Caasimadda Galmudug ayaa degan ka dib markii shalay ay ka dhaceen dagaallo qaraar oo u dhaxeeyay Xooggaga Ahlu Sunna Waljamaaca iyo ciidanka dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa maamulka Galmudug.
Ciidanka xoogga dalka iyo maamulka caasimadda Dhuusamareeb ayaa sheegay in ay ku guuleysteen ilaa iyo xalay in ay ka saaraan Ahlusunna deegaanada u dhow magaalada halkaasi oo ay ka dagaallameen shalay galinkii dambe.
Boqolaal qoys oo habeen hore ka qaxay magaalada Dhuusamareeb ayaa hadda qorsheynaya in ay dib ugu soo laabtaan magaalada oo ay ka maqnaayeen ku dhawaad 24 saac.
Ahlusunna wali wax war kama soo saarin duulaanka ay ku qaaday caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ee shalay balse looga itaal roonday sida Galmudug ay sheegtay.
Dhammaadkii bishii October 2021 ayaa xooggaga Ahlu Sunna waxaa laga saaray degmada Guriceel oo ay muddo kooban haysteen, waxaana dagaalkaas ka dhashay khasaaro baahsan.
Guddiga isku dhafka labada Aqal ee doorashada Madaxweynaha ayaa Goor dhow soo saaray farriin ku socota dhammaan Musharaxiinta u tartameysa xilka Madaxweynaha 10-aad e Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Qoraal ay soo saareen Guddiga doorashada ayaa waxaa Musharaxiinta looga dalbaday inay kasoo Jawaaban Codsiga Guddiga ee ah in Musharrax kasta Madaxweyne uu Guddiga u soo gudbiyo xubinta u tirinaysa codadka doorashada.
Guddiga ayaa tilmaamay in Musharaxii ku soo gudbin waaya waqtiga loo qabtay aysan suuragal noqon doonin inuu howlka doorashada soo galo qof la socda, waxaana Musharaxiinta laga Codsaday ugu dambeyn inay magacyada soo gudbiyaan 12:30 Duhurnimo ee maanta.
Doorashada Madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berri oo Axad ah ay ka qabsoonto Magaalada Muqdisho gaar ahaan Teendhada Afisyooni, waxaana xilka Madaxweynaha u tartamaya 39 Musharax, iyada oo ay socdaan ololihii ugu dambeeyay ee doorashada dalka.
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Oo Taliyeyaasha Ciidamada Kala Hadlay Amniga Doorashada
Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe Oo Kulan La Qaatay Safiirka Imaaraadka.
Ciidanka Xoogga Oo Isku Furay Waddooyin Ay Al-Shabaab Go’doomiyeen Sannado Badan
Jubbaland Oo Maanta Doorashada Golaha Shacabka Kusoo Gaba-Gabeeysay Ceelwaaq
Madaxweyne ku Xigeenka Jubbaland oo Gaaray Ceelwaaq
Hadal jeedinta Musharaxiinta u Taagan Guddoonka Aqalka Sare oo Maanta Bilaabanaysa.
Farmaajo Oo Amar Siiyey Ciidamada Ammaanka Dowladda.
Dawladda Soomaaliya oo Faahfaahisay Khasaaraha Ka Dhashay Qaraxii Liido.